ICanon EOS Rebel T3 / 1100D yeeDummies Cheat Sheet
Ngu-Julie Adair King, uRobert Correll
I-T3 / 1100D yakho igcwele izinto ezininzi kangangokuba kunokuba nzima ukukhumbula into eyenziwa ngumlawuli ngamnye, ngakumbi ukuba umtsha kufota yedijithali ye-SLR. Ukukunceda uhlele yonke into, eli phepha lokukopela libonelela ngesikhokelo esikhawulezayo solawulo kulawulo lwangaphandle kunye neendlela zokuvezwa kwikhamera yakho. Yiprinte, uyikhuphe kwisingxobo sakho sekhamera, kwaye ufumane intloko xa uthatha iifoto ezinkulu!
ICanon EOS Rebel T3 / 1100D Ubeko lweKhamera yeDijithali
Nasi isikhokelo kumaqhosha, ukucofa, kunye nolunye ulawulo lwangaphandle kwiDigital Rebel T3 / 1100D yakho. Iilensi eziboniswe kwikhamera yedijithali engezantsi yiCanon EF-S 18-55 IS (Image Stabilization) imodeli ethengiswe kunye noMvukeli; ezinye iilensi zinokwahluka.
Indlela yokuBhengeza Isikhokelo esikhawulezileyo seCanon EOS Rebel T3 / 1100D yedijithali yekhamera
I-T3 / 1100D yakho inikezela ngezi ndlela zokuvezwa zilandelayo, ozikhethayo ngokudayela kweMowudi ngaphezulu kwekhamera. Ukhetho lwakho lubalulekile kuba luchaza ukuba unolawulo olungakanani kuseto lokuthatha imifanekiso. Phawula: Iimowudi ezichazwe njengeendlela ezizenzekelayo zetheyibhile zibonelela ngokufota okuzenzekelayo kodwa zikwenza ukuba uguqule umbala kunye nokuvezwa kancinane ngokuDutyulwa yiAmbience kunye neFoto ngokuKhanyisa okanye kwiimpawu zohlobo lweScene.
Ngaba amayeza okubulala iintsholongwane anganceda iintlungu zamazinyo
ibuprofen kunye ne-acetaminophen yokudibanisa idosi
indawo yommandla wotshintsho
Utshintsha njani iphasiwedi ye-mac
iacetic acid indlebe yehla